Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny Indonezia » Farafahakeliny 41 no maty, 80 no naratra tamin'ny afon-tranon'ny Jakarta
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Crime • Vaovaom-panjakana • Zon'olombelona • Vaovao farany momba ny Indonezia • Vaovao • tompon'andraikitra • Tourism • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny sakana feno olona, ​​izay natao hitazomana gadra 40, mahazaka olona 122, hoy ny mpitondra tenin'ny departemantan'ny fonja ao amin'ny Ministeran'ny Lalàna sy ny zon'olombelona any Indonezia.
Tamin'ny 2 ora sy sasany maraina no nisehoan'ny afo tao an-toerana ary naharitra adiny iray mahery.
Gadra valo no naiditra hopitaly ary naratra maty.
Fihodinana fohy mandeha amin'ny herinaratra inoana fa nahatonga ny afo.
Nilaza ny tompon'andraikitra mpampihatra lalàna Indoneziana fa olona 41 no maty ary farafahakeliny 80 hafa no naratra vokatry ny hain-trano nigadra tao Tangerang, akaikin'ny renivohitry ny firenena. Jakarta amin'izao fotoana izao.
Raha ny filazan'ny lehiben'ny polisy ao Jakarta Inspector General Fadil Imran, ireo gadra naratra rehetra, anisan'izany ireo gadra valo naratra mafy, dia nentina tany amin'ny hopitaly sy tobim-pahasalamana akaiky.
Tamin'ny 2 ora sy sasany maraina no nitrangan'ny afo ary maty tamin'ny 20 ora sy sasany maraina, ary lalan-kely mandeha amin'ny herinaratra no nety ho nahatonga ny haintrano, hoy ny komisera zokiny zokiny Jakarta Yusri Yunus.
Ny sakana feno olona, ​​izay natao hananana gadra 40, mahazaka olona 122, hoy i Rika Aprianti, mpitondra tenin'ny departemantan'ny fonja ao amin'ny Ministeran'ny Lalàna sy ny zon'olombelona any Indonezia.
Ny ankamaroan'ny gadra voatazona ao amin'ny sakana voakasik'izany dia ireo voarohirohy tamina tranga mifandraika amin'ny zava-mahadomelina sy mifoka rongony, raha ny filazany.